Huawei Watch GT 2: Akara ọhụrụ smartwatch bụ nke gọọmentị | Akụkọ akụrụngwa
Na mgbakwunye na nwunye ọhụrụ 30, Huawei hapụrụ anyị ụnyaahụ na akụkọ ndị ọzọ na mmemme ngosi ya. Akara ndị China gosiputara ọhụụ ọhụụ ya. Ọ bụ ihe gbasara Huawei Watch GT 2, nke bụ ọgbọ nke abụọ nke ihe nlereanya a, mgbe nsonaazụ dị mma nke afọ gara aga site na nke mbụ. Ahịa ya karịrị nde 10, dịka ụlọ ọrụ ahụ kwuru ụnyaahụ.
Oge nche ọhụrụ a na-awụsa ụbọchị ole na ole gara aga. Yabụ imebe ya bụ ihe anyị maara ugbu a, mana ugbu a ọ mechara bụrụ nke gọọmentị. E gosipụtara Huawei Watch GT 2 dị ka elekere nke nnukwu mmasị, yana nkọwa dị mma, na mgbakwunye na ịbịarute na mmelite ụfọdụ na ọrụ ya.
Ihe nlere anya leaks n'izu a. Ọ họrọla ihe mara mma, nke dị mma, mana nke ahụ na-eguzogide n'ụzọ zuru oke mgbe ị na-egwu egwuregwu. Anyị na-ahụ chassis ígwè nke dị ezigbo mkpa, nke na-emekwa ka ọ bụrụ obere elekere. Maka ihuenyo ahụ, ejirila iko 3D gbara gburugburu na akụkụ ya gbagọrọ agbagọ, na-enye ihe dị mma karị.
Tụkwasị na nke a, Huawei Watch GT 2 a na-abịa jiri okpokolo agba dị. N’akụkụ aka nri nke nche ahụ, e nwere bọtịnụ abụọ, nke na-eulateomi okpueze nke oge ochie. Ha dị mfe iji ma nye anyị ohere ịgagharị gburugburu interface ma ọ bụ nweta ụfọdụ ọrụ na elekere.
Emepela elekere ahụ na nha abụọ na ahịa, otu nwere igwe ntanetị 46 na nke ọzọ nwere mpempe akwụkwọ 42-millimita. Ọ bụ ezie na anyị nwere data nke ihe nlereanya kachasị na nke a, 46mm. Huawei Watch GT 2 biara na ihuenyo 1,39-anụ ọhịa nha. Ọ bụ ihuenyo emere na panel AMOLED na mkpebi ya bụ 454 x 454 pikselụ.
N'ime nche bụ Kirin A1 mgbawa. Ọ bụ ihe nrụpụta ọhụrụ nke onye nrụpụta maka ngwaọrụ dịka wearables. N'ezie, anyị ahụla ya na FreeBuds 3 nke ewepụtara na IFA n'ọnwa a. Ihe nhazi ahụ nwere nhazi nhazi Bluetooth dị elu, ihe nhazi ihe ntanetị ọzọ, ma pụta ìhè karịa maka ike oriri ya dị ala. N'ụzọ dị otú a, nche ga-enye anyị nnwere onwe dị ukwuu.
N'ezie, dị ka Huawei gosipụtara na nkwupụta ya, Huawei Watch GT 2 a ga-enye anyị nnwere onwe nke ruru izu abụọ. Ọ bụ ezie na ọ ga-adabere n'akụkụ ya na ojiji anyị na-eme yana ọrụ ya. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji mmụba GPS na-aga n'ihu, ọ ga-enye anyị ihe ruru awa 30 nke iji, na ụdị 46 mm, na 15 awa na nke ọzọ. N'ihi ya, ọ ga-adabere na onye ọrụ ọ bụla na ọrụ ha na-eji.
Enweela ikike nchekwa na nche ahụ. Kemgbe ugbu a, Huawei Watch GT 2 na-enye anyị ohere iji chekwaa egwu 500 enweghị nsogbu ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe abụ kachasị amasị anyị mgbe niile dị na ya.
Huawei Watch GT 2 bụ elekere egwuregwu, yabụ anyị nwere ụdị ọrụ niile maka egwuregwu. Ọ nwere ikike ịmata ma tụọ egwuregwu 15 dị iche iche, ma n’ime ụlọ ma n’èzí. Egwuregwu anyị hụrụ na ya bụ: ịgba ọsọ, ịga ije, ịrị ugwu, ịgba ọsọ ugwu, ịgba ịnyịnya ígwè, igwu mmiri na mmiri ghere oghe, triathlon, ịgba ịnyịnya ígwè, igwu mmiri na ọdọ mmiri, ọzụzụ n'efu, elliptical na rowing igwe.
Otu uru dị na ya bụ na anyị ga-enwe ike iji ya na igwu mmiri, na ụdị mmiri niile. Elekere bụ IP68 gbaara, nke na-eme ka mmiri ghara ịbanye na ya. Asambodo a na-eme ka o kwe omume ikpu ya ruo mita 50, dị ka a pụrụ ịhụ na nkwupụta ya, na-eme ka ọ dị mma iji ya mgbe ị na-eme egwuregwu. Ọ ga-aga n'ihu ịlele ọrụ anyị n'oge niile, dịka anya, ọsọ ma ọ bụ obi obi.
Ya mere, jiri Huawei Watch GT 2 a anyị nwere ike nwee njikwa zuru oke nke ọrụ anyị n'oge niile. Otu n'ime ọrụ ya bụ mmụba nke obi, usoro e mere, njem dị anya, calorie ọkụ, na mgbakwunye na ịlele ọkwa nrụgide nke ndị ọrụ. Na mgbakwunye na ọrụ egwuregwu ya, elekere ahụ na-enye anyị ọtụtụ ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịnata ọkwa na ya, nata oku, gee egwu oge niile, yabụ anyị ga-enwe ike iji ya n'ụdị ọnọdụ ọ bụla na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Na nkwupụta ya, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na Huawei Watch GT 2 a na-aga malite na Spain na Europe na ọnwa Ọktọba. N'oge a, ọ dịbeghị ụbọchị a kapịrị ọnụ n'ọnwa Ọktoba maka mwepụta a, mana n'ezie a ga-enwe ozi ọzọ na nke a n'oge na-adịghị anya.
Kedu ihe ndị gọọmentị bụ ọnụahịa nke ụdị abụọ nke elekere ahụ. Maka ihe nlereanya na dayameta 42 mm anyị ga-akwụ ụgwọ euro 229. Ọ bụrụ na nke anyị chọrọ bụ 46 mm otu, mgbe ahụ ụgwọ bụ 249 euro na nke a. Akara ahụ na-ebupụta ha na agba dị iche iche, yana ụdị eriri dị iche iche na mgbakwunye, yabụ na anyị nwere ọtụtụ nhọrọ n'ọhịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Huawei Watch GT 2: Akara ọhụrụ smartwatch bụ nke gọọmentị